Home News Guddiga Joogtada ah ee Baarlamanka oo diidey in ay la fadhiistaan Ra’iisul...
Guddiga Joogtada ah ee Baarlamanka oo diidey in ay la fadhiistaan Ra’iisul Wasaare Kheyre. (Sababta)
Waxaa shalay oo ay taariikhdu ahayd Oktober 16, 2018. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dalbadey 11 bishan Oktober in uu la kulmo Guddiga Joogtada ee Baarlamanka Federaalka ah si uu warbixino la xiriir arimaha waxqabadka dowladdiisa u siiyo isagoo ku talo jiray in uu soo wato xubno ka tirsan Midowga Yurub iyo AMISOM oo ay wehliyaan golahiisa wasiirada. Ujeedka RW Kheyre aya ahayd in uu indho sarcaadiyo beesha caalamka si uu ugu dhaadhiciyo in uu la kulmay Baarlabaanka JFS isla markaana siiyay warbixin buuxda oo ku saabsan wax qabadka dowladdiisa fadhiidka ah.
Waxaa sidoo kale jira in uu si xowli ah ku socdo Mooshin qarsoodi ah oo ay wadaan in ka badan 140 xildhibaan kaasoo aanan weli la ogeyn cidda uu yahay bartilmaameedka Xildhibaanada (RW Kheyre ama Farmaajo). Sida ay u sheegeen MOL xildhibaano Kheyre aya raba in uu wax ka ogaado mooshinka iyo in isaga uu yahay bartilmaameedka mooshinka ay wadaan Xildhibaanada.
Bilowgii bishan October ayaa waxaa ay Xildhibaanada Baarlamaanka ee Golaha Shacabku ay bilaabeen mooshino qarsoodi ah oo aad u miisaan culus, labada mooshin lagu doonaa in lagu rido madaxweynaha ama Ra’iisul Wasaaraha mid kood ayaa la ogaadey in ay aad u xoog badan yihiin.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa labadii maalin ee la soo dhaafey waxaa uu si xoogleh u dareemey culeys weyn oo ka imaanaya dhica Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta ka soo horjeeda qaabka ay u shaqeyso xukuumada Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Maadaama ay diideen Guddiga Joogtada ah ee Golaha Shacabku in la fadhiistaan Ra’iisul Wasaare Kheyre, Madaxweynaha ayaaba laga yaabaa inuu go’aan deg deg ah qaato hadiiba ay xaaladu sidaan ku siisocoto maalmaha soo socda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa uu lumiyey kalsoonida shacabka Soomaaliyeed, waxaana shacabka iyo saaxiibada aad ugu dhaw Madaxweyne Farmaajo ay dareensan yihiin in madaxweynaha uu u afduuban yahay koox maafiyo ah oo uu horjooge u yahay Fahad Yasin.
Waxaa muuqaneysa in Ra’iisul Wasaare Kheyre uu yahay shaqsi Sharafta ay ka dhamaatey oo ay dadka Soomaaliyeedna aad u naceen laakiin keliya rabitaanka Madaxweynaha uu ku joogo.
Previous articleXil.Cabdishakuur Cali Mire oo Maxaabiis Al-shabab ah ka sii daayey Xabsiga dhaxe iyo dood ka dhalatay
Next articleTaliye Indha Qarshe ”Mayeeli Karno In Shabaab Uu Sii Joogo Sh/hoose”
Beesha Habar-Gedir oo aan u kala hari doonin soo dhaweynta CC...
Sarakiisha Amanka Kenya oo So Bandhigay Magacyada Sedex Ruux oo Ka...